Banyere Anyị - Wilk International Trade (Weifang) Co., Ltd.
Azụ Wilk International Trade (Weifang) Co., Ltd.bụ oru zuru oke na-etinye nyocha sayensị, mmepụta na ire ahịa. Ọ na-emi odude ke Laizhou City, Shandong Province, a nnukwu mmepụta isi maka ewu ígwè, mwube ígwè na-akọ ugbo ígwè na mba. Isi mmepụta: Wheel Loaders, excavators, Self Loading Concrete Mixers, 4 wheel forklift truck, Backhoe Loader na ndị ọzọ na-ewu ụlọ ígwè. Ka ọ dị ugbu a, azụmahịa ahụ karịrị mba 60 na mpaghara gụnyere Japan, South Korea, Brazil, Mexico, Dubai, Australia, South Africa na Middle East, Central Asia, Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, na European Union.
Anyị ụlọ ọrụ tumadi na-arụpụta Loaders, excavators, Self Loading Concrete igwekota, 4 wheel mbanye forklift ụgbọala wdg Ngwaahịa na-tumadi na-ere ihe karịrị 20 anāchi achi na China na mbupụ ọtụtụ mba na mpaghara na Africa, Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, South America na Russia.
Companylọ ọrụ ahụ nakweere teknụzụ German iji mepụta, na-agbakọta ahụmịhe, ma jikọta nkwalite na-aga n'ihu site na ozi nzaghachi ndị ọrụ sitere n'akụkụ ụwa niile, na-atụle ihe ndị chọrọ chọrọ nke ndị ọrụ, ma jiri nwayọọ nwayọọ guzobe usoro nlekọta njikwa njikwa oke oke yana zuru okè, ngwa ngwa na-adọ mgbe-sales akụkụ ọkọnọ ọrụ netwọk. N'ihe banyere ụdị azụmaahịa azụmaahịa, ọ kwekọrọ na usoro mmepe nke e-commerce, ma na-enyocha okporo ụzọ ọhụụ nke "Ntanetị +ntanetị" nke dabara adaba maka mmepe nke ya.
Qualitydị mma na arụmọrụ nke ndị na-ebu wheel anyị na 4 wheel forklift gwongworo nọ n'ọkwá na-eduga nke ụlọ ọrụ na mba niile ma ndị ọrụ nabatara ya nke ọma. Ugbu a, "WIK" ika Wheel loaders na Self Loading Concrete Mixers enwetawo nnabata ndị na-ere ahịa ma na-eji China niile.
Anyị na-elekwasị anya na mma, arụmọrụ na ịtụle nke ndị ọrụ dị ka mgbe niile. N'ime njikwa, anyị enwetala ọkwa ọhụrụ site na ịnabata ISO9001: 2000 sistemụ njikwa njikwa mba ụwa.
Ihe omuma ulo oru nke ulo oru bu: icho eziokwu na ohuru ohuru, icho ndu site na ogo, ichota mmepe na teknụzụ ohuru, icho obi ike site na oru di nma na nke zuru oke, karie onwe anyi, ma gbalita ike ahia mba uwa. Na ihe ntughari R & D na ohuru ohuru. Mepụta ngwaahịa na ọrụ asọmpi nye ndị ahịa anyị.